Fanatajahantena : Atleta malagasy miisa 88 hiofana any Chine -
AccueilVaovao SamihafaFanatajahantena : Atleta malagasy miisa 88 hiofana any Chine
31/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mazava. Mitohy ary mihamafy ny fifanarahana eo amin’ny Fanjakana malagasy sy ny Repoblikan’i Chine. Fantatra mantsy ankehitriny fa atleta malagasy miisa 88 hanatrika sy hiatrika fiofanana any Chine.
Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra, taranjam-panatanjahantena miisa dimy no nifantenana ireo atleta malagasy ireo. Ny voalohany amin’izany ny eo amin’ny taranja atletisma (7 vavy, 11 lahy), badminton (4 vavy, 14 lahy), haltérophilie (10 vavy, 8 lahy), lomano (7 vavy, 11 lahy) ary ny tenisy ambony latabatra (6 vavy, 10 lahy). Tsy vitan’izay fa mbola miaraka amina teknisianina roa avy isaka ny taranja ireo atleta ireo. Marihina fa mahazo fiofanana ihany koa ireto farany fa tsy manaraka ireo atleta fotsiny ihany akory.
Ankoatra izay, voalaza fa haharitra 120 andro ny fiofanana atrehin’ireo delegasiona malagasy, izay mafonja dia mafonja ireo. Ny 14 avrily izao kosa ny daty voatondro hiaingan’ny delegasiona eto an-toerana hihazo an’i Chine.
Raha ny mikasika ny fifantenana indray, dia nisy ny fiofanana natrehin’ireo atleta malagasy avy amina taranjam-panatanjahantena dimy voatondro ireo, izay notarihina manam-pahaizana sinoa. Taorian’ny fiofanana kosa, dia niatrika fitsapana izy ireo nandritra ny herinandro, ary taorian’ny fitsapana kosa no namoahana ny lisitr’ireo hanaraka ilay fiofanana avo lenta any Chine.
Voalaza fa ho fanomanana sahady ny fiatrehana ny Lalao Olympika any Japon no antom-pisian’ny fiofanana. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ara-teknika isaka ny taranja sy ny tanjaka ara-batana, sns.
Etsy andaniny, fifanarahan’i Madagasikara sy Chine manokana ity fanomezana fiofanana ity ho fampandrosoana ny fanatanjahantena. Voalaza mantsy fa hiantohan’ny firenena ny mombamomba ny fivahinianan’ny delegasiona malagasy mandritra ny 120 andro.
Ankoatra izay, raha ny fanazavan’ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena (MJS), Andriamosarisoa Jean-Anicet, dia mitohy hatrany ny fampivondronana sy ny fanomanana ireo atleta malagasy etsy amin’ny Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha.